ကမ္ဘာတလွှား ထူးထူးခြားခြား ရေအောက်နေရာများ - Thutazone
ကမ္ဘာတလွှား ထူးထူးခြားခြား ရေအောက်နေရာများ
ရေးသားသူ – မယ်ရူပ (Living Fashion Magazine)
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ဟာရေတွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းနေတယ်ဆိုတော့ ရေအောက်ကမ္ဘာလေးတွေထဲ စူးစမ်းရှာဖွေတဲ့ခရီးမသွားဖူးသေးဘူးဆိုရင် အတွေ့အကြုံပြည့်ဝတဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တစ်ဦးလို့ ပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ ရေအောက်ထဲမှာဘာတွေရှိနိုင်မလဲ။ သန္တာကျောက်တန်းဖွဲ့စည်းပုံတွေ၊ ရေအောက်ပြတိုက်တွေ၊ နစ်မြုပ်နေခဲ့တဲ့သင်္ဘောပျက်ကြီးနဲ့ အံ့သြဖွယ်ရာထူးခြားလှတဲ့ ရေအောက်ဟိုတယ်တွေရှိနေနိုင်တယ်။ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ရေအောက်ကမ္ဘာက ထူးခြားတဲ့နေရာလေးတွေကို လိုက်ကြည့်ရအောင်နော်။
ကာရစ်ဘီယံပင်လယ်အရှေ့တောင်ဘက်ပိုင်း ကျွန်းနိုင်ငံ Greneda ရဲ့ ပန်းပုပန်းခြံဟာ တကယ့်ကိုအံအားသင့်စရာကောင်းလှတဲ့ ရေအောက်အနုပညာပြခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရဲ့ moliniere ပင်လယ်အော်ဘက်မှာတည်ရှိပါတယ်။ အဲဒီပန်းပုလက်ရာတွေကိုကြည့်ရှုဖို့ ရေအောက်အသက်ရှုပိုက်နဲ့ ရေငုပ်ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ဖူးသူ၊ အလေ့အကျင့်ရှိသူဖြစ်နေရပါလိမ့်မယ်။ Greneda ရဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်အာဏာပိုင်တွေက ရေအောက်ထဲ မဆင်းလိုသူတွေ ပန်းခြံအပေါ်ဘက်မြင်ကွင်းကြည့်ရှုနိုင်အောင်လည်း ဖန်သားအောက်ခြေပါလှေတွေစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ ရေအောက်ပန်းပုပန်းခြံထဲမှာ အင်္ဂလိပ်ပန်းချီ/ ပန်းပုပညာရှင် Jason De Caires Taylor ရဲ့ ကွဲပြားတဲ့ပန်းပုလက်ရာ ၆၅ ခုကျော်ရှိနေပါတယ်။
ပန်းပုရုပ်တွေရဲ့ အရောင်အသွေးနဲ့တည်ဆောက်ပုံဟာ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်းရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်အချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲနေတယ်။ အဲဒီပန်းပုရုပ်တွေဟာ သေးငယ်လှတဲ့ သမုဒ္ဒရာရေသတ္တဝါလေးတွေရဲ့ ဘေးမဲ့တောဖြစ်နေပါတယ်။ သန္တာကျောက်တွေရဲ့ပုံစံကလည်း အချိန်နဲ့အမျှ ပိုပြီးကြီးထွားလာနေပါတယ်တဲ့။ ပန်းပုရုပ်တွေရဲ့ သက်တမ်းက ၄ နှစ်ခန့်ရှိပါပြီ။ ပထမဆုံးပန်းပုရုပ်ကို ၂၀၁၀ ဖေဖေါ်ဝါရီလမှာ နေရာချခဲ့ပါတယ်။ နှစ်စဉ်ပန်းပုရုပ်အသစ်တွေထပ်ပြီးပေါင်းထည့်ပေးကြတယ်။ အကြီးဆုံးပန်းပုရုပ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Zemi ပန်းပုရုပ်ဟာ ကျောက်သားကိုထွင်းထုထားပြီး သဘာဝလွန်စွမ်းအားရှိတယ်လို့လည်း ယုံကြည်ကြတယ်။ သမုဒ္ဒရာကြမ်းပြင်မှာ အရောင်အသွေးစုံလင်လှတဲ့ ပင်လယ်ရေညှိနဲ့ သန္တာကျောက်သားတွေပေါင်းစပ်ပြီး “သဘာဝတရားရဲ့အနုပညာ” တစ်ခုဖြစ်လို့နေတယ်။
9. Jules Undersea Lodge, Florida
Jules ရေအောက်အပမ်းဖြေအိမ်ခန်းလေးဟာ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် Key Largo ကျွန်းမှာတည်ရှိပြီး ကျော်ကြားတဲ့ ရေအောက်ဟိုတယ်တစ်ခုပါ။ ရေမျက်နှာပြင်ကနေ ၂၁ ပေနက်ထဲ့ ရေအောက်က Jules ဟိုတယ်ကိုရောက်ရှိဖို့ အသက်ရှုကိရိယာနဲ့ရေငုပ်ကြတဲ့ scuba diving အသုံးပြုကြရပါမယ်။ အဲဒီရေအောက်ဟိုတယ်လေးဟာ Florida သန္တာကျောက်တန်းရဲ့ Emarald lagoon အပူပိုင်းမျက်နှာပြင်မှာတည်ဆောက်ထားတာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့အိမ်လေးလိုပဲ Jules အပမ်းဖြေအိမ်မှာ တော်တော်လေးသက်တောင့်သက်သာရှိမယ့် မီးဖိုခန်း၊ ရေပူချိုးခန်းနဲ့ အိပ်ခန်းတွေရှိနေပါတယ်။
ထူထဲခိုင်မာလှတဲ့ပြတင်းပေါက်တွေကနေ ပင်လယ်သဘာဝအလှနဲ့ ဘဝတစ်ခုကို အနီးကပ်မြင်တွေနိုင်ကြပါမယ်။ လှပတဲ့အိန်ဂျယ်လ်ငါး၊ ကြက်တူရွေးငါးနဲ့ ဒေါသထွက်နေဟန်ရှိတဲ့ကြောက်စရာအရွယ်ကြီးကြီး ဘာရာကူဒါငါးတွေနဲ့လည်း ဆုံနိုင်တယ်။ ခရီးသွားတွေဟာ Emarald lagoon ရဲ့ သဘာဝပျိုးခင်းတစ်ခုအတွင်းက သိပ်ကိုလှပတဲ့ကျောက်တန်းတွေတည်ရှိနေတဲ့စနစ်ပုံစံကိုလည်းကြည်နူးနှစ်သက်စဖွယ်ေတွေ့မြင်ရမှာပါ။
8. Underwater Wedding, Bali
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီကျွန်းဟာ လက်ထပ်မယ့်စုံတွဲလေးတွေရွေးချယ်ကြတဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်လည်း ကျော်ကြားလှတယ်။ သာမန်ရိုးရှင်းတဲ့မင်္ဂလာပွဲပုံစံနဲ့ မတူဘဲ ကိုယ့်ဘဝရဲ့ မေ့မရတော့မယ့် အချိန်ကာလလေးအဖြစ် ရေအောက်မင်္ဂလာပွဲလေး ဘာလီမှာပြုလုပ်နိုင်တယ်။ အဲဒီသုခဘုံကျွန်းလေးဟာ ကမ္ဘာမှာ ပျားရည်ဆမ်းခရီးထွက်ကြတဲ့နေရာအဖြစ်လည်း ပေါ်ပြူလာဖြစ်လှတယ်။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ရေငုပ်သူတွေသာ ရေအောက်မင်္ဂလာပွဲပြုလုပ်နိုင်ကြပေမယ့် တခြားသူတွေအတွက်တော့ မင်္ဂလာပွဲရက်မတိုင်ခင် ကျွမ်းကျင်သူတွေဆီက လေ့ကျင့်မှုရယူနိုင်ပါတယ်။
ကြိုတင်စာရင်းပေးထားသင့်ပြီး ဘာလီကျွန်းရဲ့ တချို့ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုလေးတွေအတိုင်း လိုက်ပါဆောင်ရွက်ရမှာပါ။ ပင်လယ်ထဲမှာတစ်ရက်တာအချိန်ဖြုန်းဖို့ လှေငှားနိုင်တယ်။ တစ်မူထူးခြားလှတဲ့ ပင်လယ်နောက်ခံရှုခင်းအလှနဲ့ တန်ဖိုးရှိလှတဲ့အချိန်ကာလလေးကို မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ဖို့ ရေအောက်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးပေးသူကိုလည်း တစ်ပါတည်းငှားရမ်းနိုင်ကြပါတယ်။
7. Underwater Post Office, Vanuatu
တောင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲက တစ်သီးတစ်ခြားတည်ရှိနေတဲ့ ကျွန်းနိုင်ငံလေးမှာ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးရေအောက်စာတိုက်ရှိနေပါတယ်။ ရေမျက်နှာပြင်ကနေ ၃ မီတာအနက်မှာတည်ရှိတယ်။ ရေကူးသမားတွေနဲ့ ရေငုပ်သမားတွေအတွက် ကမ်းခြေနဲ့နီးကပ်နေတဲ့ အဲဒီရေအောက်စာတိုက်လေးဆီ အလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်ကြတယ်။ အဲဒီကနေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆွေမျိုးတွေဆီ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ရေစိုခံပို့စကတ်တွေ ပို့နိုင်ပါတယ်။ ရေအောက်စာတိုက်ကနေ ရေငုပ်သမားတွေအတွက် အသက်ရှုပိုက်၊ ရေငုပ်ဝတ်စုံတို့ စီစဉ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ပို့စကတ်လေးတွေ ပို့ရင်းနဲ့ စွန့်စားခန်းအသစ်တစ်ခုရနိုင်မယ့် အစီအစဉ်တစ်ခုပါ။
6. Serpent Slide at Atlantis Paradise
Atlantis Paradise ဟာ ကျူးဘားနဲ့ ဟစ်ပန်နီယိုလာကျွန်းမြောက်ပိုင်းက လှပတဲ့ Bahamas ကျွန်းမှာတည်ရှိပါတယ်။ အဲဒီအံ့သြဖွယ်ရာပန်းခြံဟာ ကျယ်ပြောလှကုန်းမြေ ၁၄၁ ဧကတစ်လျှောက်ဖြန့်ကြက်တည်ဆောက်ထားတယ်။ ရေပေါ်ရေအောက်အပမ်းဖြေနည်းတွေနဲ့ ဆော့ကစားနိုင်ကြဖို့ ရေဂါလံ သန်း ၂၀ အသုံးပြုထားပါတယ်။ ရေလွှာလျှောစီးအမျိုးမျိုးလည်းရှိပြီး အဲဒီထဲကမှာ ဝင်္ကပါလိုကွေ့ကွေ့ကောက်ကောက်ရေလွှာလျှောစီးတာကတော့ ရင်ဖိုစရာအကောင်းဆုံး တစ်ခုဖြစ်နေမှာပါ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရေလွှာစီးလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ ငါးမန်းတွေပြည့်နေတဲ့ lagoon ထဲက ဖြတ်ပြီးဆောက်လုပ်ထားတာကြောင့်ပါ။ ငါးမန်းတွေကို အနီးကပ်မြင်ကွင်းခံစားကြည်ရှုနိုင်ကြတယ်။ အဲဒီ lagoon ထဲမှာ နှုတ်သီးအမည်းငါးမန်းတွေ၊ ဘာရာကူဒါငါးတွေနဲ့ လွှသွားပါ ငါးတွေနဲ့ တူပုံစံဦးခေါင်းရှိတဲ့ ငါးမန်းတွေရှိနေပါတယ်။ ခိုင်မာထူထဲပြီး ထွင်းဖောက်မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကျယ်မှန်ချပ်တွေဟာ ခရီးသည်တွေ ပင်လယ်ရေသတ္တဝါတွေကို အနီးကပ်မြင်ကွင်းရရှိဖို့ အထောက်အပံ့ပေးနေတာပေါ့။
5. Shark Reef Aquarium, Las Vegas
ငါးမန်းကျောက်တန်းငါးပြတိုက်ဟာ လာ့စ်ဗေးဂတ်စ် Mandalay ပင်လယ်အော်ထဲမှာ တည်ရှိပါတယ်။ ပင်လယ်ထဲက သားရဲတိရိစ္ဆာန်တွေကို တစ်နေရာထဲမှာပဲ နီးနီးကပ်ကပ်မြင်တွေခွင့်ရနိုင်မယ့် အမှန်ကန်ဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုလို့ ညွှန်းပါတယ်။ မြင်ကွင်းကျယ်ကျယ်ထဲ ပင်လယ်ရေအောက်အမြင်အာရုံနဲ့ အသံလှိုင်းတွေဟာ မမေ့နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သွားမှာပါ။ ငါးမန်းကျောက်တန်းငါးပြတိုက်မှာ ပင်လယ်ရေသတ္တဝါပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ကြွယ်ဝစွာရှင်သန်နေကြတယ်။ ငါးမန်းမျိုးစိတ် ၁၅ မျိုးခန့်ဟာ ဒီငါးပြတိုက်ထဲမှာ ဆွဲဆောင်မှုအရှိသုံးသားရဲတိရိစ္ဆာန်တွေပေ့ါ။ တခြားရှားပါးတဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်တဲ့ အစိမ်းရောင်ပင်လယ်လိပ်ကြီးတွေ၊ ရွှေရောင်မိကျောင်း၊ ငါးခြင်္သေ့နဲ့ ကိုမိုဒိုဖွတ်ကြီးတွေကလည်း နှစ်စဉ်ခရီးသည်အရေအတွက်များများ ဒီပြတိုက်ကိုလာရောက်လည်ပတ်နိုင်ဖို့ ဆွဲဆောင်နေကြတယ်။
4. Ambassador Lagoon, The Palm, Dubai
ဒူဘိုင်းနိုင်ငံက Ambassador Lagoon ကျွန်းမှာ မျိုးစိတ်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ ပင်လယ်ရေသတ္တဝါပေါင်း ၆၅၀၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ ဒီထူးခြားအံ့သြဖွယ်ရာ lagoon မှာ သဘာဝပင်လယ်ရေလီတာ ၁၂ သန်းထိန်းထားပါတယ်။ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အတ္တလန်တစ်မြို့တော်ကို ရှာဖွေစူးစမ်းနိုင်မယ့် အတွေ့အကြုံအပြည့်အဝခံစားနိုင်မှာပါ။ scuba diver ဖြစ်နေဖို့မလိုပါဘူး။ အသက်ရှုပိုက်နဲ့ မျက်နှာဖုံးနဲ့အတူ၊ အထူးဝတ်စုံတွေစီစဉ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ မိနစ် ၃၀ ကြာစူးစမ်းလေ့လာကြတဲ့ခရီးမှာ ကျွမ်းကျင်သူတွေကို ရှင်းလင်းတဲ့လမ်းညွှန်မှုပေးသွားမှာပါ။ မြင်ကွင်းကျယ်မှန်ချပ်တွေကို ဖြတ်ပြီး အပြင်ဘက်က lagoon မှာရှိနေတဲ့ ရေသတ္တဝါမျိုးစိတ်အမျိုးမျိုးကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
3. Red Sea Star Underwater Restaurant, Eliat
အာရေးဘီးယန်းပင်မကုန်းမြေအနောက်ဘက်၊ ပင်လယ်နီမြောက်ပိုင်း၊ အစ္စရေးတောင်ဘက်အစွန်းဆုံးက ဆိပ်ကမ်းမြို့လေး Eliat မှာ Red Sea Star စားသောက်ဆိုင်တည်ရှိတယ်။ အံ့ဘခန်းပင်လယ်ထဲကပန်းဥယျာဉ်နဲ့ ရေသတ္တဝါတွေကို ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ပင်လယ်စာအမယ်စုံအရသာရှိရှိစားသုံးနိုင်ပါတယ်။ ရေအောက်စားသောက်ဆိုင်မှာ နေပိုင်း ညပိုင်းအချိန်ခွဲခြားထားတယ်။ Red Sea Star စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ တည်ဆောက်ပုံတဲ့ အတွင်းပိုင်းအခင်းအကျင်းဟာ အင်မတန်လှပနေတယ်။ လူ ၁၀၅ ဦးဆန့်တဲ့ စားသောက်ဆိုင်ပါ။ ထမင်းစားပွဲတစ်ခုစီမှာ အပြင်ဘက်က ပင်လယ်သဘာဝအလှအပကိုကြည့်ရှုခံစားနိုင်မယ့် ကြီးမားတဲ့ပြတင်းပေါက်တစ်ခုစီပါဝင်တယ်။
ဖီဂျီကျွန်းနိုင်ငံက Poseidon Undersea Resort ပင်လယ်ရေအောက် ပေ ၄၀ ခန့်မှာတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ဒီရေအောက်အပမ်းဖြေခန်းမှာ အဆင့်မြင့်ခန်း ၂၄ ခန်းနဲ့ ဘား၊ လက်ထပ်ပွဲကျင်းပဆုတောင်းရာအခန်း၊ spa နဲ့ စာကြည့်တိုက်တွေပါဝင်တယ်။ စုံတွဲတွေအတွက် ရက်သတ္တတစ်ပတ်ကို ဒေါ်လာ ၁၅၀၀၀ ကုန်ကျပါလိမ့်မယ်။ Poseidon ရေအောက်အပမ်းဖြေခန်းမှာ ခိုင်မာလှတဲ့မှန်ချပ်တွေရှိတဲ့ပြတင်းတွေကနေ ပင်လယ်သဘာဝအလှအပတွေကို ငေးမောနိုင်ပြီး အရသာရှိလှတဲ့ပင်လယ်စာတွေမြည်းစမ်းနိုင်ပါတယ်။ ရေငုပ်ဝတ်စုံ၊ အသက်ရှုပိုက်တွေစီစဉ်ပေးပြီး ရေအောက်ကမ္ဘာကိုလိုက်လံကြည့်ရှုနိုင်ဖို့လည်း တာဝန်ရှိသူတွေက စီစဉ်ထောက်ပံ့ပေးထားတယ်။
1. Conrad Rangili Island, Maldives
ဒီစားသောက်ဆိုင်ဟာ အင်တာနက်ကွန်ရက်မှာ အကောင်းဆုံးရေအောက်အပမ်းဖြေအိမ်အဖြစ်ဆုရရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဆင့်မြင့်အခန်းတွေ၊ ဘားနဲ့ တခြားအပြင်အဆင်တွေအပြည့်အစုံပါရှိတယ်။ ကမ္ဘာမှာ တစ်ခုတည်းသော မှန်အားလုံး သုံးထားတဲ့ရေအောက်စားသောက်ဆိုင်ဖြစ်ပြီး ပင်လယ်စာကောင်းကောင်းနဲ့ အဖျော်ယမကာကောင်းကောင်းဧည့်ခံနိုင်ကြတယ်လို့လည်း နာမည်ကြီးလှတယ်။ စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ နေရာတိုင်းကနေ ပင်လယ်ကျောက်တန်းဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ပင်လယ်ထဲကဘဝပုံစံ အံ့ဘနန်းမြင်ကွင်းခံစားကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ။
ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ spa နဲ့ အားကစားအထောက်အပံ့ပစ္စည်းတွေလည်းစီစဉ်ထားတယ်။ အသက်ရှုပိုက်သုံးပြီး ဝေလငါးတွေနဲ့ ရေအောက်ထဲစူးစမ်းကြည့်ရတဲ့ခရီးသွားအတွေ့အကြုံရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Conrad Rangili ကျွန်းစားသောက်ဆိုင်ကနေ ရေလွှာလျှောစီး၊ အားကစားတွေဆင်နွှဲနိုင်သေးတယ်။ Maldives ကျွန်းတွေမှာ ကမ္ဘာ့အံ့ဘနန်းထူးခြားလှပတဲ့ကမ်းခြေတွေရှိနေပါတယ်။ အဲဒီကမ်းခြေတွေမှာ ပင်လယ်ရေအောက်မြင်ကွင်း ခံစားကြည့်တာဟာလည်း အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ ။
Source: Top 10 must see underwater places in the world | www.themysteriousworld.com
(Living Fashion Magazine)
ဖြိုးဖြိုး (My World Blog)